यो सातवटा संकेतले बताउँनेछ तपाईको फोन ह्याक भएको छ कि छैन, समाधानको उपाय यस्ता छन् | Rajmarga
यो सातवटा संकेतले बताउँनेछ तपाईको फोन ह्याक भएको छ कि छैन, समाधानको उपाय यस्ता छन्
तपाईको खल्तीमा रहेको मोबाइल फोनमा तपाईसँग सम्बन्धित कयौ महत्वपूर्ण र निजी जानकारीहरु हुने गर्दछ । साथीको तस्वीरदेखि कार्यालयको आवश्यक नम्बर वा बैंक खाताका विवरणहरु पनि हुने गर्दछ । मोबाइल अहिलेको संसारमा हामी सबैको खल्तीमा रहेको ‘रकेट’ हुने गर्दछ ।
अब आफै सोच्नुस्, तपाईलाई थाहा भयो कि तपाईको फोन ह्याक भयो ? तपाईको उत्तर हुनेछ चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्या समाधान होस् । तर तपाईको फोन ह्याक पनि भयो तर तपाईलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नै भएन भने के होला ?
हामी तपाईलाई यहाँ यस्तै सात महत्वपूर्ण जानकारी दिँदैछौ, जब सम्भवतः कसैले तपाईको फोन ह्याक गर्ने कोशिस गर्न सक्दछ, त्यो चाहे मानिसको दिमागले होस कि प्रविधिको प्रयोगबाटः
यदि तपाईको फोन सामान्यभन्दा पनि कम स्पीडमा चलिरहेको छ, यस्तो भाइरस वा कुनै मेलीसियस प्रकारका प्रोग्रामका कारण पनि हुन सक्दछ । मेलिसियस प्रोग्राम अर्थात यस्तो प्रोग्राम जसले फोनको परफरमेन्सेस र युजर्सलाई हानी पुराउन सक्दछ ।
यसप्रकारको भाइरसले तपाईको फोनको स्पीड र परफरमेन्सलाई सिधैं प्रभावित पार्दछ । तर, यो पनि ध्यानमा राख्नुस् कि नियमित रुपमा फोनमा अपरेटिङ सिस्टम अपडेट भएका कारण पनि यस्तो हुन सक्दछ । एप्पलले हालै पुरानो संस्करणको आइफोनको स्पीड कम हुने कुरा स्वीकार गरेको थियो ।
फोन निकै तात्नु
तपाईले ध्यान दिनु भएको होला, अक्सर तपाईको फोन केही तातो हुने गर्दछ । अमेरिकन इन्टल प्रविधि एक्सपर्टले यसको कारण यसरी बताए–सम्भव छ कि तपाईको फोनमा कुनै मेलिसियस एप्लीकेशन ब्याकग्राउण्ड चलिरहेको छ ।
फोन तात्नुको एउटा कारण त्यस्ता ऐपलाई सही तरिकाबाट बन्द नगर्नु पनि हुन सक्दछ ।
फोन लगातार तातो हुँदा त्यसको असर ब्याट्रीमा पर्दछ । यसकारण ब्याट्री जीवनभन्दा कमै चल्ने गर्दछ । तर, यहाँ जुन कारण महत्वपूर्ण छ त्यो हो सिस्टम अपडेट । मोबाइल जोन वेभसाइटका अनुसार यदि अपडेट साँच्चिकै निकै नयाँ वा प्रभावकारी छ भने यसो गर्न हिचकिचाउनु पर्दैछ ।
केही अवस्थामा फोन ह्याक भएको जानकारी तपाईलाईभन्दा पहिला तपाईका आफन्तलाई हुन्छ । शायद तपाईले ध्यान दिनु भएको होला, कि कतिपय अवस्थामा तपाईलाई अपरिचित नम्बरबाट म्यासेज आउँछन्, वा तपाईको फोनबाट स्वतः म्यासेज जान्छ । यस्तो स्थितिमा तपाईका साथी र परिवारजनका व्यक्तिलाई एसएमएस वा वाट्सऐपको माध्यमबाट यस्ता म्यासेज प्राप्त हुन्छ । यद्यपि ती म्यासेज तपाईले पठाउनु भएको हुँदैन ।
तब कुनै दिन तपाईका कुनै साथीले भन्यो कि फलानो म्यासेज किन पठाएको ? र तपाईले त्यो म्यासेज पठाएकै नहोस तब यसलाई ह्याकर्सको करामत मान्न सकिन् छ। यस्तो स्थितिमा मात्र एउटा बटनमा भरोसा गर्नुस्, त्यो हो डिलिट ।
यसप्रकारको आक्रमण ईमेलको माध्यमबाट तपाईसम्म आउने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पहिलो सुझाव यो छ कि यसलाई तत्काल बन्द गरिदिनुस र यस्ता कुनै पनि लिङ्कमा क्लिक नगर्नुस्, जसले बढी प्रलोभन दिइरहेको छ। अलगअलग सिस्टममा फोन लगाउँदा पनि यस्ता भाइरस मोबाइलमा प्रवेश गर्ने गर्दछन्।
कुनै विन्डो खोल्नु
कतिपय अवस्थामा यस्ता भाइरस पनि हुन्छन्, जो अचानक तपाईको फोनमा खुलेर आउँछन् । कहिले यो विज्ञापनको रुपमा हुन्छ त कहिले यो तपाईलाई नयाँ विन्डो वा ट्याबमा लैजान्छ । कम्प्युटरको भाषामा यसलाई पप–अप्स भन्ने गरिन्छ ।
साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट जोसेफ स्टिनबर्ग भन्छन्–जसरी कम्प्युटरमा इन्टरनेटका कारण नयाँ ट्याब्स खुल्छन्, ठिक त्यसरी नै फोनमा पनि यो ट्याब खुल्दछन् । यसबाट बस सावधान रहेर टाढा रहनु आवश्यक छ।
तपाई आफ्नो फोनमा ऐप कहाँबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ र यो कस्तो ऐप्स हो, यो कुराले निकै अर्थ राख्दछ । धेरै अवसरमा तपाईको इन्टरनेट प्याक यसकारण चाँडै सकिन्छ, किनभने यस्ता ऐपले धेरै इन्टरनेट डाटा खाने गर्दछ ।
स्टिनबर्ग भन्छन्–फोनलाई अपडेटेड राख्नु निकै आवश्यक छ। तर ऐप्स बनाउन कम्पनी वा सर्भिस प्रोभाइडर विश्वासिलो हुनु जरुरी छ। यदि यस्तो भएन भने फर्जी ऐप्सबाट बचेर रहनु आवश्यक छ। विज्ञहरुको सुझाव छ कि तपाई जुन ऐप डाउनलोड गर्न चाहनु हुन्छ, त्यसलाई इन्टरनेटमा पहिला खोज्नुस, भरोसा छ भने मात्र त्यस्ता ऐप्स डाउनलोड गर्नुस् । अन्यथा त्यसको हानी यो हुन सक्दछ कि यस्ता ऐपको माध्यमबाट ह्याकर्सले तपाईको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका हुनेछन् । त्यसैले फोनमा पैसासँग सम्बन्धित लेनदेन सोचविचार गरेर मात्र गर्नु जरुरी छ।
इन्टरनेटमा कुनै पनि गर्ने बेला कतिपय अवस्थामा विचित्रको आवाज आउन लाग्दछ । या त्यस्त वेभपेजमा अनावश्यक र असामान्य कुरा देखिन थाल्छ । यस्तो यसकारण पनि हुन सक्छ, किनभने टाढा कतै बसेको ह्याकरले तपाईको डिभाइस नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । परिणम यो हुन्छ कि तपाईको फोनले विचित्र तरिकाले काम गर्न थाल्दछ।
सबैभन्दा डरलाग्दा कुरा यो हो कि यदि तपाई कसैसँग फोनमा कुरा गरिरहनु भएको छ र पछाडि विचित्रको आवाज आइरहेको छ भने तब सम्भव छ कसैले तपाईको कुराकानी रेकर्ड गरिरहेको हुन सक्छ । यसक्रममा यदि बीप वा यस्तै आवाज लगातार आइरहेको छ भने तब कल रेकर्ड हुने सम्भावना सबैभन्दा बढी हुन्छ ।
यो सबै समस्याको समाधान के ?
–विश्वासिलो कम्पनीको एउटा एन्टी–भाइरस फोनमा राख्नुस्।
–जुन ऐप्सलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको छैन, त्यसलाई डिलिट गरिदिनुस् ।
–निःशुल्क वाइफाई प्रयोग गर्ने लालचमा सबै स्थानमा फोन नजोड्नुस् ।
–फोनमा यस्तो पासवर्ड राख्नुस, जुन कसैले अन्दाजा नै गर्न नसकोस् ।
–पप–अप्समा भुलेर पनि क्लिक गर्दै नगर्नुस् ।
–डिभाइसलाई अपडेट राख्नुस्, भर सम्हालिएर ।
–कति इन्टरनेट डाटा खर्च भइरहेको छ, यसमा ध्यान दिने गर्नुस् । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या
Next post: रामेछापको गोकुलगङगा गाउपालिका कृषिमय बन्दै, युवाहरुको कृषिमा बढ्दो आकर्षणले बिदेश पलायन रोकिने बिस्वास